Arzantina: Mi* Sehatra Ho An’ny Olom-pirenena Mpanao Gazety Miteny Espaniola Vao Misondrotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jolay 2017 10:12 GMT
Nitsimoka tao Arzantina ny tranonkala Mi * fanaovan-gazetin'ny olom-pirenena , fikasana ho lasa sehatra ho an'ny olom-pirenena mpanao gazety miteny espaniola vao misondrotra mba hamoahany ny asany sy handraisany fanehoan-kevitra, hiresahany foto-kevitra, hahazoany fiofanana sy hizarany votoaty. Ao Arzantina, Ekoadaoro ary Repoblika Dominikanina ihany aloha hatreto no ahitana ny atrikasan'ny fanaovan-gazety ho an'ny olom-pirenena , ary efa nandray anjara tao amin'ny tranonkala ny olom-pirenena avy ao amin'ireo firenena ireo sy avy any amin'ny firenen-kafa .
Azonao atao ny misoratra anarana ao amin'ny atrikasa virtoaly na mivantana eo amin'ny sisin'ny pejin'ny tranonkala. Araka an'i Jacinto Lajas ao amin'ny bilaogy Citizen Journalism [es]:
Mba hanatontosana izany, dia nikarakara ny Atrikasan'ny Fanaovan-gazety ho an'ny Olom-pirenena izy ireo izay efa natao tany amin'ny firenena samihafa, ary misokatra ho an'ny besinimaro sy natao mba hanomezana sehatra fandraisana anjara mivantana ho an'ny olom-pirenena ao amin'ny fampitam-baovao. Hanomezana ny tanora ny fitaovana misy ao amin'ny vondrom-piarahamonina My Asterisk izany mba hahafahan'izy ireo mampahafantatra ny heviny, ny olana misy sy ny fizarana votoaty.
Afaka mamorona ny mombamomba anao ianao ao amin'ny tranonkala Mi*, mandefa sary , lahatsary , manoratra lahatsoratra , mandefa ny zava-mitranga , manatevin-daharana ny vondrona , manokatra adihevitra. Ny sasany amin'ireo vondrona malaza indrindra dia ahitana ny “Future Journalists” (Mpanao Gazetin'ny Hoavy), “History of the Coup d'etat” (Tantaran'ny fanonganam-panjakana ), “Colombia, Beloved Homeland” (Kolombia, Ry Tanindrazana malala) sy “No to Police Force's Abuses” (Tsia ho an'ny herisetran'ny polisy).
Avy amin'i Andrea Hernández ny iray amin'ireo lahatsary nalefan'ny mpandray anjara tao amin'ny tranonkala ary miompana amin'ny fidiram-bolan'ny olona mivarotra tsy ara-dalàna eny an-dalambe. Ato amin'ity lahatsary fanadihadiana notontosain'ny cdimarcoa ity, no ahitantsika ny rotoroton'ny olona isan'andro izay mivelona amin'ny fivarotana sakafo anaty baoritra sy ny antso an-telefaonina amin'ny minitra ao an-tanàndehiben'i Bogotá: